UPDATE: Ma run baa in Xildhibaano ka tirsan DF Soomaaliya laga kaxeystay ilaaladii, Yaase ka dambeeyay falkan?! | HalQaran.com
UPDATE: Ma run baa in Xildhibaano ka tirsan DF Soomaaliya laga kaxeystay ilaaladii, Yaase ka dambeeyay falkan?!
Muqdisho (Halqaran.com) – Warar ay helayso mareegta Halqaran.com, ayaa sheegaya, in xildhibaanno ka tirsan aqalka sare iyo golaha shacabka laga kaxeystay dhammaan ciidamadii ilaalin jiray ee ka tirsanaa kuwa xoogga dalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah xildhibaannadan ayaa Halqaran.com u xaqiijiyay, in taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Odawaa Yuusuf Raage uu ka kaxeystay dhammaan ilaaladii la joogtay mas’uuliyiintaasi.
Xildhibaannada ayaa sheegay in ay xaalad halis ah hadda ay ku sugan yihiin, islamarkaana aysan kasoo bixin guryaha iyo Hoteellada ay ka degan yihiin caasimadda Muqdisho.
Senator Nuura Faarax oo ka mid ah Xildhibaanada Aqalka Sare oo la hadashay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in muddo todobaad ah ay waddeen dadaallo ay ku doonaayeen in ciidanka Ilaaladda u ahaa dib loogu soo celiyo, balse ay ku guul-dareysteen.
Sidoo kale, Nuura Faarax ayaa xustay, in falka ilaalada looga watay uu ka dambeeyo Taliyaha Ciidanka Xoogga Odawaa Yuusuf Raage oo dhawaan la Magacaabay xilkaasi.
Ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in xildhibaanno ka tirsan Aqalka sare iyo golaha shacabka laga kaxeysto ciidamadii ilaalin jirtay ammaankooda.
ciidamadii ilaalada u ahaa
Odawaa Yuusuf Raage
xaalad adag ku jira
Xildhibaano ka tirsan Aqalka sare